Wisdom of Dhamma: နိယာမ
ကမ္ဘာလောကမှာ ရှိနေတဲ့ မညီမျှမှုတွေရဲ့ အဓိကအကြောင်းဟာ ကံပါလို့ ဗုဒ္ဓဒေသနာက သင်ကြားပေမယ်လို့ ကံကြမ္မာသာ အဓိကဝါဒ (fatalism) သို့တည်းမဟုတ် သတ်မှတ်ပြဓာန်းခံဝါဒ ဝါ ဘုရားသခင် အလိုတော်ကျဝါဒ(the doctrine of predestination)ကို ဟောဆိုသင်ပြပေးသည်မဟုတ်ပေ။ အကြောင်းမှာ အရာရာတိုင်းသည် အတိတ်ကံကြောင့်သာ ဖြစ်ရ သည်ဟူသော အမြင်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာက ကိုင်စွဲမထားသောကြောင့်ပင်။ ကမ္မနိယာမသည် ဗုဒ္ဓဒဿနတွင် ဖော်ပြထားသော အကြောင်းတရား နှစ်ဆယ့်လေးခုအနက် တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ (Compendium of Philosophy ကျမ်း စာမျက်နှာ ၁၉၁ ကို ကြည့်ပါ။) တနည်းပြောရသော် ကမ္မနိယာမသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်က နိယာမတရားများဖြစ်ကြလျက် စကြာဝဠာကြီးတွင် လှုပ်ရှား လည်ပတ် သက်ရောက်နေသည့် နိယာမတရားငါးပါးအနက် တစ်ပါးမျှသာ ဖြစ်သည်။ နိယာမတရား ငါးပါး ဆိုတာက တော့ -
၁။ ဥတုနိယာမ - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဇီဝအခြေခံမဟုတ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဥပမာ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ လေနှင့် မိုး၏ သဘောသဘာဝ။ ရာသီဥတုတို့၏ အတွင်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဝိသေသလက္ခဏာသဘောဆောင်သည့် ရာသီဥတု ဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲဖြစ်ပျက်မှုများ၊ လေတိုက် ခြင်း မိုးရွာခြင်းတို့၏ အကြောင်းတရားများ၊ ပူခြင်းစသည်တို့၏ သဘောသဘာဝ စသည်တို့သည် ဤဥတုနိယာမအုပ်စုတွင် ပါဝင် သည်။
၂။ ဗီဇနိယာမ - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဇီဝအခြေခံဖြစ်သည့် မျိုးစဉ်၊ မျိုးဗီဇများနှင့် မျိုးစေ့များ။ ဥပမာ - စပါးမျိုးစေ့မှရသော ဆန်၊ ကြံ သို့မဟုတ် ပျားရည်မှပေးသည့် ချိုသောအရသာ၊ အချို့သော သစ်သီးများ စသည်တို့၏ ထူခြားသော သဘောသဘာဝများ။ သိပ္ပံသဘောတရားဖြစ်သည့် ကလာပ်စည်းများ၊ မျိုးဗီဇများ နှင့် အမြွှာ တို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တူညီမှုများကို ဤနိယာမကြောင့်ဟု မှတ်ယူ၍ ရနိုင်ကောင်းပါသည်။
၃။ ကမ္မနိယာမ - ကံနှင့် ကံ၏အကျိုးပေးပုံနိယာမ၊ ဥပမာ - လိုလားအပ် မလိုလားအပ်သော ပြုလုပ်မှု (ကံ) များသည် သက်ဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်စေသည်။ ရေသည် ၎င်း၏ level ကိုအသေအချာပင် ရှာဖွေသကဲ့သို့ ကံသည် လည်း အကျိုးပေးခွင့် ရသောအခါ ရှောင်လွှဲ၍မရသော အကျိုးရလဒ်ကို ဖြစ်စေပါသည်။ သို့သော်လည်း ဆုလာဘ် သို့မဟုတ် ပြစ်ဒဏ်ခတ်သည့် ပုံစံမျိုးဖြင့် မဟုတ်ပဲ အလိုလိုပါသည့် အစီ အစဉ်မျိုးဖြင့် အကျိုးပေးပါသည်။ ကံနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု တို့၏ အစဉ်ကား လနှင့် ကြယ်တာရာတို့၏ လည်ပတ်သွားလာပုံကဲ့သို့ သဘာဝလည်းကျ၊ လိုလည်းလိုအပ်လှပေသည်။
၄။ ဓမ္မနိယာမ - သဘာဝနိယာမ၊ ဓမ္မတာသဘော၊ ဥပမာ - ဘုရားအလောင်းတော် ၎င်း၏နောက်ဆုံး ဘဝတွင် ဖြစ်ပေါ်သော သဘာဝမျိုး။ သဘာဝ၏ဆွဲငင်အားနှင့် အခြားသော အလားတူ နိယာမများ၊ ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်း စသည် စသည်တို့ကို ဤအုပ်စုတွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
၅။ စိတ္တနိယာမ - စိတ်၏သဘော၊ ဥပမာ - ဝိဉာဏ် (စိတ်)ဖြစ်စဉ်၊ ဝိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ် ချုပ်ပျောက်မှု၊ ဝိဉာဏ်၏ အစိတ်အပိုင်း များ၊ စိတ်စွမ်းအင်၊ အဝေးမှာရှိနေသူနှင့် မနောခြင်းဆက်သွယ်မှု၊ အဝေးသိဒွါရပို (telesthesia)၊ အတိတ်သိဉာဏ် (retrocognition)၊ စိတ်လေး စိတ်ထင့်ခြင်း၊ အကြားအမြင်ရခြင်း၊ လူ့ဒွါရလွန်သိ (clairaudiene)၊ စိတ်အကြံကိုသိခြင်း၊ ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာသို့ ရှင်းပြ၍မရနိုင်သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သဘောတရားများသည် ဤအုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။ (အဘိဓမ္မဝတာရ၊ စာ- ၅၄)။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရှိရှိသမျှ အရာခပ်သိမ်းသည် ဤနိယာမ တရားငါးပါး တွင် အကျုံးဝင်ပေသည်။ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရာခပ်သိမ်းကို နိယာမ တရားတို့ဖြင့် ရှင်းပြလို့ရသည်။ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်က နိယာမ ဥပဒေသများဖြစ်နေရကား ဥပဒေချမှတ်ပေးသူ (ဖန်ဆင်းရှင်) မလိုအပ်တော့ပေ။ ကံတရားဟူသည် ကား နိယာမတရားငါးပါးအနက် တစ်ပါးမျှသာ ဖြစ်ပါသ တည်း။
(ဆရာတော် ဦးသေဋ္ဌိလ၏ “Essential Themes of Buddhist Lectures“ မှ The Laws of Cosmic Order ကို ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။ နိယာမတရားကို အသေးစိတ်လေ့လာလိုသူများ လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ “နိယာမဒီပနီကျမ်း“ ကို ဖတ်ရှုပါရန် အကြံပြုပါသည်။ ထိုကျမ်းသည် လယ်တီဒီပနီပေါင်းချုပ်၊ ပထမတွဲ (မိခင် ဧရာဝတီ စာအုပ်တိုက်၊ တတိယအကြိမ်၊ ၂၀၀၁-ခု၊ စာ- ၄၉၇ - ၅၄၉)တွင် ပါရှိပါသည်။ နိယာမဒီပနီကျမ်းကို ပါဠိဘာသာမှ Meni M. Barua, D. Litt., က အင်္ဂလိပ် ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့ပြီး၊ M.A Mrs. C.A.F. Rhys Davids, D. Litt., M.A က ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ထား ပါသည်။ ဘာသာပြန်ဆရာ အသီးသီးက အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထားပြီးသော ထိုကျမ်းအပါအဝင် ဒီပနီ ကျမ်းပေါင်းရှစ်ကျမ်းကို The Manuals of Buddhism အမည်ဖြင့် သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်မှ လည်း ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှ စတင်ခါ ရိုက်နှိပ်ထုပ်ဝေထားပြီးပါပြီ။ ၎င်းကိုပင် Mahamakut Rajavidalaya Press, Bangkok, Thailand က ၁၉၇၈ ခုနှစ်က ပုံနှိပ်ဖြန့်ချိထားပါသေးသည်။ ထို့ပြင် ယခုအခါ ၎င်း Manuals ကိုပင် The Selangor Buddhist Vipassana Society က ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် အုပ်ရေ ၁၀၀၀၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် အုပ်ရေ ၂၀၀၀ နှင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် အုပ်ရေ ၁၀၀၀ ကို free distribution (ဓမ္မဒါန)အဖြစ် ဖြန့်ချိထားပါသည်။ သို့ဖြစ်ရကား အင်္ဂလိပ် မြန်မာ နှစ်ဘာသာတွင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာဘာသာနှင့် ဖတ်ရန် အစဉ်ပြေပါကြောင်း ဘာသာ ပြန်သူ၏ ဖြည့်စွက်ချက်အနေဖြင့် အသိပေးအပ်ပါသည်။
Posted by ဘုန်းဉာဏ် at Monday, March 08, 2010
▼ 07/03/10 - 14/03/10 (4)
Free Will (ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ်)